Izindaba mayelana nobunjiniyela beDelta: imicimbi, ama-fairs, izincwadi zezindaba
Kuhlala kukhona okusha okufanele kubonwe eDelta Engineering. Noma ngabe ukuthuthuka okusha noma ukuthuthuka kumishini ekhona ngokubambisana kwamakhasimende ethu.
Ngabe ufuna ukuba usesikhathini? Khetha esinye sezihloko ezingezansi ukuthola imininingwane enemininingwane eminingi:
Delta Ubunjiniyela emithonjeni yezindaba
nezinsuku 25th NgoFebhuwari - 3rd Mashi 2021
Isikhala sokubukisa I-TBC
Ikheli UMesse Düsseldorf | E-Düsseldorf, eJalimane
Iwebhusayithi esemthethweni www.interpack.com
IMIPHAKATHI YOKUFUNDA KWE-PLASMA
Landa isithombe sesikrini
I-DELTA Platingma Coating
Ukuhlanganiswa kwe-Plasma, osekuyisikhathi eside kusetshenziselwa ukwelapha ingaphezulu lamabhodlela esiphuzo, akuyona nje izinkampani zokuphuza ezithambile. Le ndlela, engasetshenziselwa ukwenza ngcono umgoqo wegesi wamabhodlela we-PET, nayo inikela ngezinzuzo uma kukhiqizwa imikhiqizo ye-HDPE neziqukathi ezinkulu.
I-Plasma ingesinye sezifundazwe ezine zezindaba, kanye nokuqinile, uketshezi negesi. Imishini emisha yokuhlanganisa imishini i-Delta Engineering ilungiselela ukumiswa kwamakhemikhali okwenziwe nge-plasma (PECVD).
Izinzuzo ze-Plasma Coating
Inhlanganisela ye-Plasma iyindlela esebenzayo yobuchwepheshe be-multilayer, enikeza izinzuzo ezahlukahlukene. Uma kuqhathaniswa nobuchwepheshe be-multilayer, kuyabiza kakhulu futhi kubuye futhi kusimame ngokubuka kwemvelo.
Ubuchwepheshe bokupheka benza kabusha isebenze kahle futhi isebenze, isinyathelo esibalulekile emnothweni oyindilinga.
Chofoza lapha ukufunda indatshana.
I-UDK450 ITHUKUTHELELWE KU-1 MALI 2LO
Ukufakwa ngaphakathi kwe-Delta Engineering's UDK 450 system leak-ukuthola umshini. Uhlelo lokuzikhethela lusebenzisa uhlelo lwe-state-of-the-art, i-high-voltage system ngokushesha futhi ngokuzenzakalelayo ithola futhi inqabe iziqukathi ezinama-microcracks.
Izindleko nokonga isikhala. Ukuhlanganisa uhlelo lokubona okuvuza ngaphakathi kohlaka lomshini longa isikhala futhi kubiza kakhulu kunokuthenga uhlelo ngokwahlukile.
UDlulisa unikeza NGEMPELA UKUQEDA UNIT
Landa ukukhishwa kwezindaba njengephepha-mbhalo le-PDF
Umqeqeshi omusha we-Delta Engineering ufaka i-coating coating emabhodleleni ukubhekana nezinkinga eziningana ezivame ukuthinta amabhodlela we-PET emigqeni yokugcwalisa. Amabhodlela angena ku-conveyor, abese abanjwa ngentamo futhi aphathwe kabi nge-anti-static coating ngaphambi kokuthi amabhodlela owomile abuyiselwe kumhambisi ozophuma emshinini ngesilinganiso samabhodlela angaba ngu-8,000 ngehora.
Lo mshini, owenzela i-North American DUTUT yakhe eNPE2018.
Ikhwalithi yomkhiqizo ethuthukisiwe kanye nokusebenza okubushelelezi kokukhiqiza. Amabhotela aphathwe umqeqeshi mancane amathuba okuthi abambeke phakathi kwabaqondisi, athuthukise ukugqama, amamaki amancane e-scuff kanye ne-static encane. Abasebenzisi bangenza izinguquko ngokushesha futhi kalula ukuze bamukele izinhlobo ezahlukene zamabhodlela. Futhi, inqubo entsha yokufafaza yomshini isebenza kahle, inciphisa ukusetshenziswa kwensimbi.
Ukubuyiselwa komcimbi Ubunjiniyela beDelta eNPE
nezinsuku 7 - 11th Kwangathi 2018
Isikhala sokubukisa S18058
Ikheli Orlando, Florida USA
Ukuthunyelwa kweBelgian emahhovisi ethu kusuka e-Atlanta